Somali daily News – Natiijada Horyaalada Britain,Italy,Germany iyo Spain (Ronaldo oo sedexley dhaliyay)
Natiijada Horyaalada Britain,Italy,Germany iyo Spain (Ronaldo oo sedexley dhaliyay)
dr.yare November 20, 2016 0
(XAMARWEYNE.COM):-Waxaa xalay iyo shalay galab la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalada kubada cagta Dalalka Britain,Italy,Germany iyo Spain kuwaasoo qaarkood ahaayeen kulamo aad u adag.
Horyaalka Spain hadaan ku hor marno waxaa iska hor yimid kooxaha waa weyn ee kala ah Real-madrid iyo Atletico Madrid ,ciyaartaas oo ahayd mid si weyn loo wada sugayay waxaa 3-0 ku adkaaday kooxda Realmadrid.
Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo ka mid ah weeraryahan adduunka ugu fiican ayaa dhaliyay sedex-gool oo mid ka mid ah uu ahaa rigoore isla isaga lagu galay.
Guud ahaan kulamada Spain laga ciyaaray ayaa sidan u dhacay:-
Deportivo La Coruna 2 – 3 Sevilla
Barcelona 0 – 0 Malaga
Atletico Madrid 0 – 3 Real Madrid
Sidoo kale kulamadii xalay ka dhacay dalka Britain waxaa ka mid ahaa kulankii dhexmaray labada Kooxood ee ka mid ah kuwo ugu awooda badan horyaalkaasi ee Manchester United iyo Arsenal taasoo ku soo idlaatay 1-1.
Hadaba halkaan ka eeg guud ahaan sida kulamadii shalay u dhaceen
ChievoVerona 1 – 0 Cagliari